'Manova, manova habe ary manery ny sary', maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra Mac App Store | Avy amin'ny mac aho
'Manova, manova habe ary manery ny sary', maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra Mac App Store
Jesus Arjona Montalvo | | Mac App Store
Miaraka amin'ny fampiharana 'Hanova, hanova habe ary hamehezana sary'afaka ianao niova fo amin'ny endrika maro samihafa amin'ny sary, manova ny habeny y hangeja azy ireo (mampihena ny lanjany). Ny fampiharana dia hita maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra, izay mazàna no vidiana 5,99 €. Ilaina tokoa ho an'ny mpamorona ny rindranasa, satria manana fiasa telo ilaina amin'ny fampiharana iray fotsiny izy io.
1. Hisintona ny sary mankany: Safidio ao amin'ny Finder ny sarinao / sary, avy eo sintomy ny sarinao, izay ahitanao ireo topi-maso.
2. Safidio ny endrika tianao: azonao atao ny misafidy PNG, JPEG, JPEG200, TIFF ary BMP.
3. Raha te-hanova habe azy ireo ianao dia zahao ilay boaty hanovana habe ary ampidiro ny sakany sy ny hahavony.
4. Raha te-hangeja azy ireo ianao dia zahao ny boaty famoretana ary safidio raha mila famatrarana faran'izay kely na kely indrindra ianao.
5. Tsindrio Save.
Mamela ny karazana sary lehibe rehetra. PSD, PNG, JPEG, JPEG200, GIF, sns.
nohavaozina: 13 / 04 / 2016
Malagasy Bible: 1.1
habe: 6.7 MB
developer: Elza Donizete.
mifanentana: OS X 10.10 na taty aoriana, mpanodina 64-bit.
Sintomy amin'ny fotoana voafetra maimaim-poana 'Hanova, hanova habe ary hamehezana sary', avy amin'ity rohy manaraka ity dia avelanay ho an'ny Mac App Store ianao.
Hanova, hanova habe ary hamehezana sary€ 6,99
Raha te hanova sary ho PNG ianao, ity rindranasa ity 'Hanova sary ho PNG' maimaimpoana ihany koa amin'ny fotoana voafetra.
Raha ny mampitsindry sary fotsiny no tadiavinao, dia maimaimpoana ihany koa ilay mpandrindra 'Ampidiro ny sary sy ny sary: ​​mampihena ny habeny ary mitazona ny kalitao', izay mampihena ny lanjan'ireo sary sy sary nefa tsy manary kalitao.
Ampifanaraho ny sary sy ny sary€ 5,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » 'Manova, manova habe ary manery ny sary', maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra Mac App Store
rodrigusterFrancisco dia hoy izy:
Mamoaka ny fotoana voafetra an'ny fisoratana anarana maimaim-poana ho an'ny Mac. Tsy tonga mihitsy izy ary hafahafa ny fofony
Mamaly an'i rodrigusterFrancisco
Jesus Arjona Montalvo dia hoy izy:
Rehefa nivoaka omaly i Francisco, maimaim-poana ireo fangatahana telo, tsy azo atao ny mahafantatra hoe hafiriana no ho maimaim-poana na ahena mandritra ny fotoana voafetra izany, satria ny mpamorona no mamaritra azy ary izy irery no mahalala.
Mpanamboatra maro mazàna no mametraka azy mandritra ny herinandro iray, fa ny sasany mandritra ny andro manokana ihany, nifarana androany ity tolotra ity. Miala tsiny fa tara ianao.
Valiny tamin'i Jesús Arjona Montalvo
Manaiky tanteraka. Vaovao navoaka tamin'ny 23:00. Tamin'ny 23:30 dia nandeha naka azy io aho ary ankehitriny (raha nisy fotoana) dia tsy maimaim-poana izany
Valiny tamin'i Marco
Misaotra ny fandraisana anjara, taraiky aho, io no paikady ampiasain'ny mpandrindra tato ho ato mba hanaovana doka ny App-ny, arahaba.
Apple hiaro ny tetikasany hanangana ny 'ivon-kevitra' any Irlandy amin'ity volana ity
Jony Ive dia manao dinidinika momba ny Business Fashion